Dɛn Na Ɛtoo Yehowa Adansefo Bere a Nasi Aban Kunkum Yudafo Pii Wɔ Wiase Ko II Mu No?
KENKAN WƆ Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Azerbaijani Baoule Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Damara Danish Digor Dutch Efik English Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kabiye Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mauritian Creole Mingrelian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nzema Oromo Ossetian Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Turkish Twi Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba
Bere a Wiase Ko II rekɔ so no, na Yehowa Adansefo bɛyɛ 35,000 na wɔwɔ Germany ne aman a Nasi aban di so no mu. Wiase Ko II no mu no, wokunkum Adansefo no mu bɛyɛ 1,500. Nea enti a wokumkum wɔn no de, ɛnyɛ ne nyinaa na yebetumi akyerɛ. Wogu so reyɛ nhwehwɛmu, enti bere rekɔ so no yebehu nea enti a ɛbaa saa.
Ɔkwan bɛn na wɔfaa so wuwui?
Adɛn nti na wɔtaa wɔn?
Ɛhefa na wowuwui?
Wɔn a wokunkum wɔn no bi
Afiri a na Nasifo de twitwa nkurɔfo ti
Wokum ebinom: Wɔ Germany ne aman a na Nasi aban no di so mu no, wokunkum Adansefo bɛyɛ 400. Wɔde wɔn mu pii kɔɔ asɛnnibea, buu wɔn kumfo twaa wɔn ti. Ebinom nso de, wɔbɔɔ wɔn tuo anaa wɔsɛn wɔn a wɔanni wɔn asɛm mpo.
Baabi a wɔde ebinom kogui no, na ɛyɛ awerɛhow: Adansefo bɛboro 1,000 wuwui wɔ Nasi nneduaban ne afiase ahorow mu. Wɔde ebinom yɛɛ adwumaden ma wɔfaa mu wui. Ebinom nso de, ɔkɔm, ayakayakade, awɔw ne yare na ekunkum wɔn. Afoforo nso, ayarehwɛ papa a wɔannya nti na wowuwui. Ayakayakade a wɔde yɛɛ ebinom nti, bere a Wiase Ko II baa awiei a woyii wɔn no, ankyɛ biara na wowuwui.
Nneɛma afoforo a ekumkum ebinom: Wɔde Adansefo no bi koguu ɔdan a mframa bɔne a wɔde kum nkurɔfo wom mu ma wowui. Ebinom de, adɔkotafo de wɔn yɛɛ nhwehwɛ mu ma wɔfaa mu wui. Wɔwɔɔ ebinom paane bɔne de kunkum wɔn.
Yehowa Adansefo de nea Bible ka bɔ wɔn bra, ɛno nti na wɔtaa wɔn no. Bere a Nasi aban no hyɛe sɛ Adansefo no nyɛ nea Bible kasa tia no, Adansefo no anyɛ. Wosii gyinae sɛ ‘wobetie Onyankopɔn sɛ sodifo mmom sen nnipa.’ (Asomafo Nnwuma 5:29). Ɛho nhwɛso mmienu ni:
Wɔamfa wɔn ho anhyɛ amanyɔsɛm mu. Yehowa Adansefo a wɔwɔ hɔ nnɛ nyinaa nyɛ amanyɔsɛm. Saa ara na Adansefo a na wɔwɔ Nasifo bere so no nso anyɛ amanyɔsɛm. (Yohane 18:36) Wɔampɛ sɛ
Wɔkɔ sraadi anaa wɔyɛ biribi de boa akodi a na ɛrekɔ so no.​—Yesaia 2:4; Mateo 26:52.
Wɔtow aba anaa wɔdɔm akuw ahorow a Nasifo atetew.​—Yohane 17:16.
Wokyia frankaa anaa wɔka sɛ “Anuonyam nka Hitler”​—Mateo 23:10; 1 Korintofo 10:14.
Wɔkaa wɔn gyidi ho asɛm. Wɔbaraa Yehowa Adansefo no sɛ ɛnsɛ sɛ wɔka wɔn gyidi ho asɛm, nanso daa Adansefo no
Bɔɔ mpae som wɔn Nyankopɔn.​—Hebrifo 10:24, 25.
Kaa Bible mu asɛm kyerɛɛ nkurɔfo na wɔkyekyɛɛ Bible ho nhoma.​—Mateo 28:19, 20.
Daa ayamye adi kyerɛɛ wɔn afipamfo ne Yudafo.​—Marko 12:31.
Kuraa wɔn gyidi mu na wɔamfa wɔn nsa anhyɛ krataa ase anka sɛ wɔnyɛ Yehowa Adansefo bio.​—Marko 12:30.
Ɔbenfo Robert Gerwarth kaa sɛ “bere a Hitler di ade no, Yehowa Adansefo ne nnipa a esiane wɔn gyidi nti, wɔtaa wɔn.” * Akokoduru a Yehowa Adansefo de gyinaa ateetee ano nti, nnipa afoforo a na wɔn nso gu nneduaban mu no ani begyee wɔn ho. Deduani bi a ofi Austria kaa sɛ: “Wɔnkɔ ɔko. Wɔpɛ mmom sɛ wokum wɔn sen sɛ wobekum obi.”
Nneduafo afie: Yehowa Adansefo dodow no ara wuwui wɔ nneduafie. Wɔde wɔn koguu afiase ahorow te sɛ: Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen, Neuengamme, Niederhagen, Ravensbrück, ne Sachsenhausen. Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ Sachsenhausen nkutoo no, Yehowa Adansefo bɛyɛ 200 na wowuwui wɔ hɔ.
Afiase: Wɔyɛɛ Adansefo binom ayakayakade wɔ afiase ma wowuwui. Afoforo nso wuwui esiane pira a wopirapiraa wɔn bere a wɔrebisabisa wɔn nsɛm no nti.
Baabi a wokum nnipa: Wokunkum Yehowa Adansefo dodow no ara wɔ Berlin-Plötzensee, Brandenburg, ne Halle/Saale afiase. Wei akyi no, wɔasan ayɛ mmeae foforo bɛyɛ 70 ho kyerɛwtohɔ a ɛkyerɛ baabi a wokunkum Adansefo no binom nso.
Wɔn a wokunkum wɔn no bi ni
Ne din: Helene Gotthold
Faako a wokum no: Plötzensee (Berlin)
Ná Helene yɛ ɔbea warefo a ɔwɔ mmofra mmienu. Wɔkyeree no toom mpɛn pii. Afe 1937 mu no, wɔyɛɛ no ayakayakade ara ma ne nyinsɛn sɛee. Wɔde afiri twaa ne ti kum no December 8, 1944 wɔ Plötzensee afiase wɔ Berlin.
Ne din: Gerhard Liebold
Faako a wokum no: Brandenburg
Ná Gerhard adi mfe 20. Wotwaa ne ti kum no May 6, 1943. Na wɔadi kan atwa ne papa ti mfe mmienu a na atwam no wɔ afiase koro no ara. Ɔkyerɛw krataa de kɔmaa n’abusuafo ne ɔbea a anka ɔrebɛware no. Ɔne wɔn dii nkra sɛ: “Sɛ ɛnyɛ Awurade na ogyinaa m’akyi a, anka merentumi nnyina mu mmedu sesɛɛ.”
Ne din: Rudolf Auschner
Faako a wokum no: Halle/Saale
Wotwaa Rudolf ti kum no September 22, 1944. Na wadi mfe 17 pɛ. Ɔkyerɛw krataa de kɔmaa ne maame ne no dii nkra sɛ: “Anuanom bebree atumi agyina mu akodu awiei, enti me nso metumi.”
^ nky. 22 Hitler’s Hangman: The Life of Heydrich, kratafa 105.
Share Share Dɛn Na Ɛtoo Yehowa Adansefo Bere a Nasi Aban Kunkum Yudafo Pii Wɔ Wiase Ko II Mu No?